दिसा, पिसाब फेर्न पीपीई खोलौ ४५ सय जान्छ, डाइपरमै गर्छौ “पिरियड हुँदा चै अति गाह्रो” : चिकित्सक – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/दिसा, पिसाब फेर्न पीपीई खोलौ ४५ सय जान्छ, डाइपरमै गर्छौ “पिरियड हुँदा चै अति गाह्रो” : चिकित्सक
दिसा, पिसाब फेर्न पीपीई खोलौ ४५ सय जान्छ, डाइपरमै गर्छौ “पिरियड हुँदा चै अति गाह्रो” : चिकित्सक
काठमाडौ । भेरी अस्पतालमा घटना घटाउने दाङका तिनै धन्धुकारी जो आफ्नो बाबु र दाजु कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित भन्ने थाहा पाउँनासाथ दशौँ मिटर पर भागे ।
अस्पताल ल्याउन चिकित्सक सहितको टोली एम्बुलेन्स लिएर पुग्यो । उठाएर एम्बुलेन्समा हाल्नेपनि उनै चिकित्सक । उनीहरु त दर्जन मिटर टाढा रहेर हेर्ने मात्र भए । स्वास्थ्य मापदण्डले त्यो गर्नुपनि उचित नै ठान्छ ।
तर उनीहरुको चिकित्सक माथीको व्यवहार माफी योग्य छैन, यसैले यी शब्द राखिएको हो । बिरामी अस्पतालमा ल्याएपछि खाना, पानी, दिसा, पिसाब उनै चिकित्सकले गराइरहेका हुन्छन् । मुखमा अक्सिजन थामेर बस्ने, भेण्टिलेटर राखिदिने, जीवबुटी औषधी ख्वाउने उनै छन् ।
के उनीहरुलाई चै संक्रमितको नजिक जाँदा संक्रमण सर्छ भन्ने डर छैन होला ? विश्वमा अझैपनि एकिन भएको छैन की यो भाइरस कसरी एक अर्कामा सरिरहेको छ । तर स्वास्थ्य सुरक्षा कवज (पीपीई) लगायो भने केही जोगिन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यही कवज (पीपीई) लगातार लगाउँदा कस्तो हुन्छ होला ? केही घण्टा हैन ८ देखि १२ घण्टासम्म उनीहरुले काम गरिरहेका छन् ।
धुलिखेल अस्पतालका बरिष्ठ डाक्टर राजेन्द्र कोजु लेख्नुहुन्छ । पानी खाने, बाथरूम जाने त कुरै भएन नि ६–७ घन्टा सम्म । पिरियड हुँदा चाहिँ … सार्है अप्ठेरो। सिस्टर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बिरामीलाई सजिलो गराउन पाए त, हामीले दुःख पाएर के भो र। ड्युटी डाक्टर बोल्नुभयो। बिरामीलाई ठिक पारेर पठाउन पाए त सबै दुःख बिर्सिन्छ। सिस्टर । -धुलिखेल अस्पताल
उहाँका वाक्यंशले जो कोहीलाई भावुक बनाउँछ । हो अहिले यस्तै भएको छ । यी शब्द देखेपछि हामीले चिकित्सकहरुलाई सोध्यौँ । अहिले कसरी काम गरिरहनुभएको छ ? अति दुर्गम जिल्ला डडेल्धुराको सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङ्ग अधिकृत कविता भण्डारी भन्नुहुन्छ सिमित जनशक्ति छ ।
तर बिरामीको चाप उच्च छ । एउटै चिकित्सकले घण्टौ काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक पटक पीपीई लगाएर काम गर्न थालिसकेपछि हामीले खाना त कुरै छैन पानी पिउन समेत मिल्दैन । दिसा, पिसाब पीपीई भित्र डाइपर लगाएर त्यही गर्ने हो । अस्पतालको बिरामी कक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि पीपीई खोल्यो भने संक्रमण सर्ने चान्स धेरै हुन्छ ।
एक पटक खोलेपछि पीपीई पुन प्रयोग गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार उचित हैन । एक पटक पीपीई लगाउन त राज्यले पुरा गर्न सकेको छैन । अब पानी पिउन, दिसा, पिसाबपछि फेर्न भनेर पीपीई सरकारी मात्र हैन नीजि कुनै अस्पतालमापनि छैन ।
नीजि अस्पतालले पीपीईको मुल्य ४५ सय सम्म राखेका छन् । त्यो पीपीईको खर्च बिरामीकै बीलमा चढ्छ । सरकारी अस्पतालमा भने निःशुल्क छ । तर त्योपनि राज्यको रकम जाने भयो । हामीले पानी पिउन, शौचालय गएपछि फेर्न भनेर ४५ सय रुपैयाँ खर्च गरिदिन सक्दैनौँ । तर त्यो ८ घण्टासम्म हामीले भोग्नु परेका पिडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न भण्डारी भन्नुहुन्छ ।
तर हाम्रो पेसा नै यही भएकाले विरामीको सेवा नै हाम्रो धर्म ठान्छौ । बरु मानिस पेसामा सम्झौता गर्न सक्ला तर धर्ममा गर्न सक्दैन । चिकित्सकहरु पेसा नै धर्म ठान्छन् । नर्सहरु सेवा नै पूजा र धर्म ठान्छन् । यसैले हामी यो कठोर अग्नीपरीक्षामा अग्रमोर्चामा छौ । यसो भनिरहँदा उहाँ निक्कै भावुक देखिनुहुन्थ्यो । उहाँले थप्नुभयो ।
हामी हाम्रो कष्ट भन्दापनि विरामी निको भएको हेर्न चाहान्छौ । जब अति जटिल विरामी निको भएर घर फर्किन तयार हुनुहुन्छ हामीले सबै पिडा भुल्छौ । र मन खुशीले भित्र भित्रै नाँचिरहेको हुन्छ ।
तर हामी यसरी खटिरहँदा अस्पतालमा नै हुने गरेका भेरी अस्पतालभित्रका जस्ता घटनाले मन सारै भाँचिन्छ उहाँ झनै भावुक बन्नुभयो । हो अहिले विश्वभरी कै चिकित्सकहरुको चित्रण यस्तै छ ।
नेपाल जस्तो गरिबीको चपेटामा परेको देशका लागि महामारी आफ्नो सामर्थभन्दा माथी छ । सिमित जनशक्तिका कारण एक जना चिकित्सिकले सयौँलाई हेर्नु परेको छ । तर यो महामारीको लडाई जित्ने अग्रमोर्चाका कमाण्डर चिकित्सकहरु मात्र हुन् । उनीहरुलाई सम्मान गरौँ । आत्मवल बढाऔँ ।
लक्ष्मी पूजाको दिन भुलेर पनि नगर्नुस् यी १८ काम, लक्ष्मी ढोकाबाटै फर्किन्छिन् !
सबै रमिते मात्र : सुन पसलमा छिरेर हात स्यानिटाइज गर्छन् अनि ६४ लाखको सामान चो’रेर भाग्छन्
कालापानी विवादबारे बोल्यो चीन, नेपाल सरकारले चाहे हतियार सहित सेना पठाउन तयार, अब के हाेला?
प्रेमिकासँग कहिलै नसोध्नुहोस् यी कुरा, नत्र पर्ला भारी